नेपाल को भौगोलिक अवस्था कुल जिडिपि र सिङ्गो अर्थतन्त्र लाई नजिक बाट हेर्ने हो भने कृषि तथा पशुपंन्छि क्षेत्रको सबै भन्दा ठुलो योगदान छ । हाल विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण तमाम पशुपंन्छि पालन गर्नेहरूको �
-देवराज धर्म चानचुने कुरा हैन, बरु सबैभन्दा ठूलो कुरा धर्म हो । धर्म भनेको वृक्ष हो । संसारका प्राणी र वस्तुहरु धर्ममा अडिएका हुन्छन् । धर्मको रक्षा मानिसले गर्नुपर्दछ, मानिसको रक्षा धर्मले गर्दछ । धर्म भनेको मानिसको जीवन पद्धत
पत्रकारिता सिकाउने व्यवहारिक पुस्तक ‘आमसञ्चार अध्ययन’
धरान । नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको प्राज्ञिक अभ्यास र अनुसन्धान नौलो नभए पनि त्यति धेरै अघि बढ्न सकेको छैन । सञ्चार, आमसञ्चार तथा पत्रकारिताजस्ता सामाजिक विज्ञान विषयमा स्तरीय प्राज्ञिक अनुसन्धान हुन सकेको छैन । भएका प्राज्ञिक
इटहरी । म सानो छदा मैले अङग्रेजीको एउटा कथा पढेको थिए । त्यसमा एउटा इप्रायर भन्ने राजा थियो । उसलाई प्रत्येक दिन नयाँ लुगा चाहिने । उसलाई लुगा सिलाउने कालिगढ पनि नयाँ डिजाइनको लुगा सिलाउदा सिलाउदै अब डिजाइन पनि सकिएपछि इम्पायर�
धरान । याक्थुङ (लिम्बु) जाति मुन्धुमी सँस्कृतिमा आधारित समुदाय भएको किरात याक्थुङ चुम्लुङका लिम्बुवान प्रदेश अध्यक्ष सह&ndash;प्राध्यापक ध्रुवकुमार मेन्याङ्वोले बताएका छन् । धर्मबारे आन्तरिक बहस चलिरहेको बेला सँस्कृतिमार्फत्
लन्डन (यूके) &divide; नेपालमा सात प्रदेशको नामाकरणको चर्चा चलिरहेको बेला लिम्बुवानलाई सह&ndash;राज्यको हैसियतमा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले माग गरेको छ । १८३१ मा तत्कालीन गोर्खाली शाषकसँग गरेको लालमोहर सन्ध�
धरान। शासन भन्नाले मानवीय व्यवहारहरुको नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई बुझिन्छ । मानिस सामाजिक प्राणीका रुपमा समाजमा व्यवस्थित रुपले बसोबास गर्न थाले पछि शासनको अवधारणाको विकास भएको मानिन्छ । यसपछि राज्य सञ्चालन पद्धतिला�
प्रकाशित मितिः आश्विन 5, 2077
श्री जङ्ग राई
धरान। सन २०१९ डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले धनी-गरिब नभनीकन संसारका सबै देशहरुको सातो लिएको छ। आधुनिक स्वास्थ्य तथा औषधि विज्ञानमा पोख्त मानिने देशहरुका प्रयासले पनि केही परिणाम दिन सकेको छैन। संसारका ख�
जापानकाे भाेगाइ जब सुत्ने समय केवल ३-४ घण्टा हुन्थ्यो, खाना बनाउनुकाे त कुरै नगरूम ?
एजेन्सी- सुनिता भुजेलले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर सकेर जापान जाने निर्णय गरिन्। ६ महिना भाषा पढिन्। जापान जान १२ देखि १३ लाख खर्च लाग्ने भयो। उनीसँग त्यति रकम थिएन। ऋण लिएर रकम भेला गरिन् अनि स्टुडेन्ट भिसामा जापान गइन्। त्यह�
धरान। पछिल्लो समयमा धरानको खानेपानीको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। परियोजना कहाँ बाट ल्याउने भन्ने विवाद नै अन्त्यसम्म बिबादित बन्यो। सप्तकोशिबाट ल्याउनुपर्छ भनेर विवाद भएको परियोजना ११ बुँदे सम्झौता गर्दै भुमिगतको पानी
धरान। नेपालमा &lsquo;दलाल&rsquo; शब्द धेरै पहिले देखि प्रयोगमा आएको शब्द हो । तर यो शब्दलाई जनमानसले नकारात्मक प्रकारले मात्र बुझेको हुनाले, यसको सट्टामा २०६६ साल देखि &lsquo;बिचौलिया&rsquo; भन्ने शब्द प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । तर यी दुइ शब्दह�
संसार कोरोना रोगका कारण थिल थिलोबनिरहेको छ । आजको दिनसम्म पनि यो रोगबाट मुक्त भइ हाल्ने स्थितिमा कुनै पनि मुलुक पुगि सकेका छैनन् । यो रोग मानवको काबु भन्दा बाहिर भएको सबैले स्वीकार गरेका छन । हाम्रो देश नेपालमा अन्य मुलुकमा जन छ
एजेन्सी- कम्प्युटर र ल्यापटपसँग पनि प्रेमका केही नियम छन्, यी नियम नमान्ने हो भने तपाईंको आँखालाई &lsquo;कुदृष्टि&rsquo; लाग्न सक्छ। आँखा हुनुको सबैभन्दा ठूलो फाइदा के होरु यो प्रश्न सोध्ने हो भने आजको युगको मान्छेले भन्न सक्छ, &lsquo;आँखा�
यसरी लाग्यो बाबुरामको नाममा टिपेक्स, दोस्रोबाट कायम भयो चौथो वरियता !
काठमाडौँ&ndash;नवगठित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) भित्र पहिलो वरियता दावी गर्ने डा.बाबुराम भट्टराईले दोस्रो नम्बरमा चित्त बुझाएका थिए । तर निर्वाचन आयोग नेपालसम्म पुग्दा उनको दुई नम्बरमा रहेको नाममा टिपेक्स लागेर एकाएक चौथ
बिना धितो, बिना ब्याज मिडियालाई उचित ऋण दिने ब्यबस्था गरियोस्
५६ दिन पछि फेरि जेष्ठ २० गतेसम्म नेपालमा लकडाउन थपिएको छ । जेष्ठ २० पछि पनि लकडाउन खुल्ने संकेत छैन । लकडाउन बढ्ने संभावना धेरै छ । यो कोरोना रोगसित बच्ने उपायहरु मध्ये आजसम्म यहि बिधि सबै भन्दा उपयुक्त बिधि देखिएका कारण अरु देश�
लकडाउन सुरु भएसगै संभावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्देै धरान उपमहानगरपालिकाले शंकास्पद अनि संक्रमितहरुलाई उपचारको लागी अस्पतालसम्म लैजान तथा अस्पतालको हेल्फ डेक्समा आएका शंकास्पद विरामीलाई आसुलेसनसम्म लैजान भनेर ४ वटा एम्बुल�
कर्मचारीतन्त्र र प्रहरीतन्त्रको संजालमा मुलुकले निकासा पाउला ?
बिषय प्रबेश:-घुसमा रङ्गेहात पक्राउ परेका केहि कर्मचारी र केही प्रहरीलाई समेत सम्मानित अदालतले सफाई दिएको थियो।"तीन महिनमा रङगेहात पक्राउ परेका १७ जनाले पाए अदालतबाट सफाई!"(नयाँपत्रीका:२९ फागुन,२०७६पृष्ठ-३ हेर्नुहोस) यातयात व्�
गर्नु गर्‍यो यो टिकटक र फेसबुकले !
मेरो आमा भन्नुहुन्छ, "हमीले हाम्रो अङ्ग परपुरूषलाई देखाउनु हुँदैन हाम्रो पुरा शरिर ढाक्नेगरी लुगा लगाउनु पर्छ ।" तर अहिलेको अवस्था हेर्दा हाम्रो दिदीबहिनीहरुको लुगा कम र अङ्ग भने बढी नै देखिने गरेको छ ।त्यसैले त अरु पुरुषहरुला
तपाईं पक्कै पनि रोगलाई जितेर छिट्टै जाति हुनुहुने छ !
कमरेड ओम कोईराला ! यो रोगलाई पक्कै जित्नु हुने छ भन्ने बिश्वास राख्दछु । नेपालको राजनीति निति नियम अनुसार चल्न नसकेर हो वा अरु नै कारणले हो, भन्न सकिएन । राजनीति निर्दयी हुदोरहेँछ भन्ने ढंगबाट पुराना नेताहरुमा अनुभूति हुन गइरहे